Queercore - ဝီကီပီးဒီးယား
Queercore (သို့ homocore) သည် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီး punk ၏မျိုးခွဲတစ်မျိုးအဖြစ် ၁၉၈၀ အလယ်တွင် စတင်ခဲ့သည်။ Queercore သည် zines ဂီတာ၊ ရေးသားခြင်း၊ အနုပညာနှင့် ရုပ်ရှင်တို့မှတစ်ဆင့် DIY ပုံစံကဲ့သို့ သူကိုယ်သူ ဖော်ပြသည်။
ဂီတအမျိုးအစားအနေဖြင့် စာသားများဖြင့် ခွဲခြားထားသည်မှာ အကျိုးယုတ်ပျက်စီးစေသည့် အကြောင်းအရာများနှင့် လိင်တူဆက်ဆံခြင်းသတင်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိက မှန်ကန်ရေး များသောအားဖြင့် တီးဝိုင်းများ၏လှုမှုရေးဆိုင်ရာ ဝေဖန်ချက်စာတမ်းများပါဝင်သည့် ဂီတာဆိုင်ရာအားဖြင့် queercore တီးဝိုင်းများသည် punk ဖြစ်ရပ်များမှ စတင်ခဲ့သည်။ သို့သော် industrial ဂီတယဉ်ကျေးမှုများ လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ queercore အုပ်စုများသည် hardcore punk, electro-punk, indie rock, power pop, No Wave, noise, experimental, industrial နှင့်အခြားအမျိုးအစားများပါ အကျုံးဝင်စေသည်။
၈၀ အစောပိုင်းတွင် အမေရိကန် hardcore တီးဝိုင်းမျာသည် queer အကြောင်းအရာသီချင်များကို ရေးသားခဲ့သည်။ The Dicks မှ Gary Floyd နှင့် Big Boys မှ Randr Turner တို့သည် သတိပြုမှတ်သားဖွယ်ကောင်းခြင်းများဖြစ်သည်။ အင်္ဂလန်မှ anarcho-punk ဖြစ်ရပ်တွင် The Apostles မှ Andy Martin သည် ညီတူညီမျှဖြောင့်မတ်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးအရ တွန်းအားပေးခဲ့သော အမေရိကတီးဝိုင်းများမှာ MDCနှင့် 7second တို့ဖြစ်ပြီး ထိုအချိန်က လိင်တူဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေး အမှာစာများကို သူတို့၏သီချင်းများတွင် ထည့်သွင်း၍ မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Zine J.D.S ကို G.B. Jones နှင့် Brauce La Bruce တို့က ဖန်တီးခဲ့ပြီး လှုပ်ရှားမှုကို စတင်ခဲ့သည်။ J.D.S သည် အပြောင်းအလဲဖြစ်စေခဲ့သည်။ မင်းမဲ့ဝါဒီဖြစ်ရပ်မှ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး J.D.S ၏ပထမဆုံးစာတည်များသည် လှုပ်ရှားမှုကို ဖော်ပြရန် homocore အမည်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး homoကို queer ဖြင့် ပြန်လည်အစားထိုးခဲ့သည်။ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းများနှင့်လည်း ဆက်စပ်နေသည်။ ပထမဆုံးအချက်ကို ၁၉၈၅တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Don’t be gay ဟူသောအမည်ကို ခေါင်းစဉ်ပေးခဲ့ပြီး Maximum RocknRoll ဂီတမဂ္ဂဇင်းတွင် အများသိစေရန် ဖော်ပြခဲ့သည်။ အခြားမဂ္ဂဇင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Holy Ticlamps ကို Larry-Bob ကတည်းဖြတ်ခဲ့သည်။ ဂီတအမှတ်တံဆိပ်များနှင့် အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုမဂ္ဂဇင်းများနှင့် လှုပ်ရှားမှုသည် အသွင်အပြင်အားဖြင့် ပြောင်းလဲစေခဲ့ပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာများကို mainstream လိင်တူအဖွဲ့အစည်းမှ ခွဲခြားလေ့ကျင်စေခဲ့သည်။ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုများ ဖန်တီးရန်နှင့် ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်နှင့် နိုင်ငံရေးဖိနှိပ်မှုများကို ဆန့်ကျင်ရန် DIY အသိုင်းအဝိုင်းကို တင်ပြခဲ့သည်။
၁၉၉၀တွင် J.D.S စာတည်းများသည် ပထမဆုံး queercore ပေါင်းစည်းထားခြင်းကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ J.D.S Top Ten Homocore Hit Parade Tape ဖြစ်ပြီး ကက်ဆက်ခွေဖြစ်၍ ကနေဒါမှတီးဝိုင်းများပါဝင်သည်။ Fifth Column; Nikki Parasite, Big Man နှင့် အမေရိကန်မှ Bomb, အင်္ဂလန်မှ The Apostles, Academy 23 နှင့် No Brain Cell နှင့် နယူးဇီလန်မှ Gorseတို့ပါဝင်သည်။ ထိုကာလအပိုင်းအခြားသည် ၁၉၈၀ နောက်ပိုင်းမှ ၁၉၉၀ အထိဖြစ်ပြီး punk rock တီးဝိုင်းအများစု ပါဝင်သည်။ ဤလှုပ်ရှားမှုကို ထောက်ခံခဲ့သည်။ အခြားတီးဝိုင်းများမှာ Los Crudos နှင့် Go တို့ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့အဝင်တစ်ယောက်မှာ လိင်တူဆက်ဆံသူဖြစ်သည်။ အခြားအစောပိုင်း queercore တီးဝိုင်းများတွင် Anti-Scrunti Function ပါဝင်ပြီး J.D.S တွင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ homocore စာတည်း Deke Nibilson ၏တီးဝိုင်းဖြစ်သည်။ J.D.Sမှ Tapeဖြင့်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးနောက် ထုတ်ဝေမှုကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ Zine များပေါ်လာပြီးနောက် Klaus ၏ Jane and Frankie နှင့် Jena Von Brucker, Vaginal Davis ၏ Shrimp နှင့် RED ၏ Fanorama အစရှိသဖြင့် ဖြစ်သည်။ Zine BIMBOX သည် အတိတ်က လိင်တူဆက်ဆံသည့်မိန်းမနှင့် ယောက်ျားများသည့် စကားရပ်ကို စွန့်လွတ်သည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။ ဒါဟာ ဆိုးရွားမှုများကို ဆန့်ကျင်သည့် ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ထပ်တူဖြစ်စေခဲ့သည်။ ၁၉၉၁ တွင် ချီကာဂိုတွင် ပထမဆုံး queer zine "Spew" ကို ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုဖြစ်ရပ်တွင် ပါဝင်သောသူများတွေ့ဆုံစေရန် အခွင့်အရေးဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဖွဲ့စည်းသူ Steve Lafreniere သည် ကျင်းပရာနေရာအပြင်ဘက်၌ ထိုနေ့ညတွင် ဓားဖြင့်အထိုးခံခဲ့ရသော်လည်း ပြန်လည်သက်သာလာခဲ့သည်။ အဖြစ်အပျက်သည် အောင်မြင်မှုရသည်အထိ အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ နှစ်နေရာဖြစ်ပြီး ၁၉၉၂တွင် Los Angeles နှင့် ၁၉၉၃တွင် တိုရွန်တို့တွင် ဖြစ်သည်။ ထို Spew အဖြစ်အပျက်တွင် queercore တီးဝိုင်းများ၏ ဂီတဆိုင်ရာ ဖျော်ဖြေမှုများပါဝင်သည်။
လူသိများသော ၁၉၉၀အစောပိုင်းတီးဝိုင်းများမှာ Fifth Column, God Is My Co-Pilot, Pansy Division, Pedro, Muril and Esthe(PME), Sister George, Team Dresch, Tribe 8 နှင့် Mukilteo Faires တို့ဖြစ်သည်။ ထိုတီးဝိုင်းများကျော်ကြားလာသကဲ့သို့ လှုပ်ရှားမှုသည်လည်း ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ Zine များ၊ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် စတင်၍ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဩစတေးလျမှ The Burning Times နှင့် UK မှ P.M.S တို့ဖြစ်သည်။
ချီကာဂိုတွင် ကျင်းပရာနေရာများတိုးပွားလာခဲ့သည်။ သတိရစရာတစ်ခုမှာ DIY: The Rise of lo-fi culture ဖြစ်ပြီး ကျင်းပခဲ့သော Homocore အဖြစ်အပျက်များကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့သည်။ သူတို့သည် mainstream လိင်တူဆက်ဆံမှုကို ဆန့်ကျင်သောအားဖြင့် ယောက်ျားများနှင့် မိန်းမများအတူတကွဖြစ်စေရန် နေရာများဖန်တီးခဲ့သည်။ သူတို့သည် စိတ်ကူးသစ်များဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
၁၉၉၂တွင် Matt Wobensmith ၏ zine Outpunk သည် မှတ်တမ်းတင်တံဆိပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူတို့၏ကိုယ်ပိုင် queercore ပေါင်းစည်းမှုများ၊ single များနှင့် album များကို ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ queercore၏ ဖွံဖြိုးမှုကို စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံးမှတ်တမ်းများမှာ Tribe 8နှင့် Pansy Division တို့မှ ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၁၉၉၀အလယ်တွင် တစ်ချို့တီးဝိုင်းများသည် အမှတ်တံဆိပ်တွင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ Sta-Prest, Cypher in the Snow နှင့် Behead the Prophet, No Lord Shall live တို့ပါဝင်သည်။ ၁၉၉၀အစောပိုင်းတွင် Riot Grrrဖြစ်ရပ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ Outpunk နှင့်အတူ independent record label များမှာ Alternative Tentacles, K Records, Kill Rock Stars, Lookout! Records, Yoyo recordings Candy Ass Record တို့ဖြစ်ပြီး queercore အနုပညာရှင်များကို ထောက်ပံခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၉၉၀အလယ်မှ နောက်ပိုင်းတွင် သီးခြားအခြား label ငယ်များ ပေါ်ထွက်လာသည်။ Outpunkနှင့်ယှဉ်လျက် queercore ကို ခုန်တက်စေခဲ့သည်။
Donna Dresch ၏ zine Chainsaw သည် second label ဖြစ်လာခဲ့သည်။ တီးဝိုင်းအသစ်များဖြင့် မှတ်တမ်းများဖြန့်ချိခဲ့သည်။ The Need, The Third Sex နှင့် LOngstocking တို့ပါဝင်သည်။ Heartcore Record သည် အခြားlabel တစ်ခုဖြစ်ပြီး The Little Deaths, Addicted2Fiction, Crowns On 45နှင့် Ninja Death Squad တို့ပါဝင်သည်။ သို့သော် ထိုတီးဝိုင်းများသည် ကြာရှည်မတည်မြဲခဲ့ပေ။ ဒုတိယဖွဲ့စည်းခဲ့သော second wave queercore တီးဝိုင်းများတွင် IAMLoved, Subtonix, Best Revenge နှင့် US မှ Fagatron, ကနေဒါမှ Skinjobs နှင့် အီတလီမှ Pussy Face များပါဝင်သည်။ အစောပိုင်း queercore label များထဲတွင် Chainsaw နှင့် Heartcore တို့ ထကြွခဲ့သည်။
၁၉၉၀အလယ်တွင် အမေရိကန်မှ zine များမှာ Marilyn Medusa နှင့် Scott Treleaven ၏ This is The Salvation Army တို့ဖြစ်ပြီး ဗာဟီရဝါဒနှင့်အတူ queercore ကိုစတင်၍ ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အခြားမှာ မင်းမဲ့ဝါဒီနှင့် ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ Pansy Division သည် Green Day နှင့်အတူ အမေရိကန်တွင် ခရီးစဉ်များလည်ပတ်စဉ် mainstream မီဒီယာများပြင်းထန်စွာ ရိုက်ခတ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၆တွင် ဆန်ဖရန်ဆစ်စကို၌ Dirtybird 96 Queercore ပွဲတော်ကို ကျင်းပခဲ့ပြီး အခြားqueer ဂီတ၏ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ရှေ့ပြေးနိမိတ်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်းနှင့် ၂၀၀၀အစောပိုင်းတွင် DUMBA နယူးယောခ့်တွင်း ကျင်းပခဲ့သောပွဲတွင် queercore တီးဝိုင်းများအတွက် အထောက်အပံဖြစ်စေခဲ့သည်။ Chicago Homocore အတွက် လမ်းကြောင်းဖြစ်စေခဲ့သည်။ အခြားနည်းလမ်းများနှင့် လည်းဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ခုနှစ်တွင် အသင်းငယ်များပေါ်လာခဲ့သည်။
၂၀၀၀ခုနှစ်တွင် queercore အသင်းငယ်များသည် ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိကတွင် ကျင်းပကြသည်။ Los Angeles ၏ silver Lake သည် underground ဂီတဖြစ်ရပ်တွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး queercore club တစ်ခုဖြစ်သော The Freak Show တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ Best Revenge, AMLoved နှင့် Nick Nameနှင့် The Normals တို့သည် ပုံမှန်တီးခတ်ကြသည်။ တိုရွန်တိုတွင် queercore ဖြစ်ရပ်ကြီးပွားလာပြီး လစဉ်အသံများ ဖြစ်သည့် club Vazaleen (သို့) Club V တို့တွင် ထူးခြားသော တီးဝိုင်းများဖြစ်သည့် အမေရိကန်နှင့် ကနေဒါမှ တီးဝိုင်းများပါဝင်ခဲ့သည်။ ထူးခြားသော ဖျော်ဖြေသူများ များတွင် Jayne Country တို့ပါဝင်သည်။ Queer Panic ပွဲတော်သည် စာရေးဆရာ Gordonမှ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၂၀၀၀ခုနှစ်ဇွန်လတွင် ဝါရှင်တန်ရှိ ဆက်တယ်မြို့တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ Scutter fest ပွဲကို Rudy Bleuက ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၂နှင့် ၂၀၀၃ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် Los Angels Scutter တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ Bent ပွဲတော်ကို ၂၀၀၂ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၃ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
Homo-a-go-go ကို ၂၀၀၂၊၂၀၀၄နှင့် ၂၀၀၆ခုနှစ်နွေရာသီများတွင် အိုလန်ပီယာ၊ ဝါရှင်တန်မြို့နယ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ queer ရုပ်ရှင်များ၊ zine များနှင့် ဖျော်ဖြေမှုများနှင့် ဂီတအုပ်စုများနှင့် ထူးခြားသော ၂၀၀၉ပွဲတော်ကို ဆန်ဖရန်ဆစ်စကို တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ queeruption ပွဲတော်ကို ကွဲပြားသော မြို့များ၌ နှစ်အသီးသီးတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ဘာလင်၊ ရုန်း၊ နယူးယောခ့်နှင့် လန်ဒန်မြို့များတွင် ဧည့်ခံကျင်းပခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၅ခုနှစ်တွင် queercore တီးဝိုင်းများသည် US တွင် ခရီးစဉ်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ထိုခရီးစဉ်ကို queercore Blitz ဟုခေါ်သည်။ အင်္ဂလန်တွင်ထကြွသော အုပ်စုများမှာ Edinburgh, Queer Mutiny, Queer Without Borders, Queer Mutiny North, Cardiff Queer Mutiny နှင့် Queer Mutiny Brighton တို့ပါဝင်သည်။
၂၀၀၂ခုနှစ်တွင် Agitprop! Records က queercore တီးဝိုင်းများ ဂီတသစ်များပေါင်းစပ်ထားသည့် Stand Up & Fucking Fight for it album ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုalbum သည် ဤlabelမှ ပထမဆုံး ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်သည်။ အလှည့်ကျ ဖော်ပြစာရင်းတွင် queercore ဖျော်ဖြေမှုများနှင့် ထူးခြားသည်။
16 record သည် queercore label တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်မှ တီးဝိုင်းများဖြစ်သည့် The Haggad နှင့် Swan Island နှင့် ဘရာဇီးတီးဝိုင်း Dominatrix တို့၏ album များကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အခြားlabel တစ်ခုမှာ Queer Control ဖြစ်ပြီး Pariah Piranha, Tough Tough Skin, Nancy Fullforce, Oncre A Pawn ဟူသော တီးဝိုင်းများ၏ album များကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
၂၀၀၅ခုနှစ် စက်တင်ဘာတွင် David Ciminell နှင့် Ken Knox တို့၏ The Lound and Raucous Rise of Queer Rock ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၁၉၉၀တွင် အမေရိကန်မှ လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ သမိုင်းကြောင်းကို အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုခေတ်အခါက ဂီတသမားတို့၏ တွေ့ဆုံတိုင်ပင်ခြင်းများ ပါဝင်သည်။ queercore သည် ၂၀၀၀ခုနှစ် အစောပိုင်းမှ နိုင်ငံတကာဖြစ်စဉ်များကို တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ Low End Models, Rhythm King, ဂျာမနီမှ Her Friends, နော်ဝေးမှ Kid like Us Outနှင့် အာဂျီးတီးနားမှ She Devils တို့ပါဝင်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံမှ တိုရွန်တိုမှ kids on TV သည် electronic တီးခတ်ခြင်းကို စူးစမ်းသူများတွင် Montral မှ Lesbians on Eastay, တိုရွန်တိုမှ The Hidden Cameras နှင့် anti-folk နှင့် ဟာလီဖက်မှ Eekum Seekum တို့ပါဝင်သည်။
၂၀၀၂ခုနှစ်တွင်လည်း အမေရိကန်တွင် အရေးပါသော တီးဝိုင်းများပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ Limp Wrist တီးဝိုင်းသည် hardcore punk ပေါက်ဖွားမှုနှင့်အတူ ကိုယ်စားပြုထားသည်။ Butch Vs Femme ကို ၂၀၀၄ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး riot grrl ဖြစ်ရပ်ကို လှုံဆော်ခဲ့သည်။ Gravy Train!!! သည် ကယ်လီဖော်နီးယား အော်လန်မှ electropop တီးဝိုင်း ဖြစ်ပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကို အတိအလင်းဖော်ပြသည့် စာသားများကြောင့် လူသိများသည်။ Kill Rock Stars label တွင် album များထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ချီကာဂိုမှ Three Dollar Bill သည် eclectric တီးဝိုင်းဖြစ်ပြီး punkမှ indie rock မှ metal ဆီသို့စီရီထားသည်။ metal ကို လှုံဆော်ခဲ့သော တီးဝိုင်းတစ်ခုမှာ ASSACRE ဖြစ်ပြီး Gay For Johnny Depp သည် နယူးယောခ့် hardcore တီးဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ The Shondes သည် ဘရွတ်ကလင်းမှ rock တီးဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး riot grrl punk ကို classical နှင့် ပေါင်းစပ်ထားပြီး ဂျုးဂီတ၏လွှမ်းမိုးမှုများပါဝင်သည်။ Schmekel သည် ဘရွတ်ကလင်းမှ ဂျူးတီးဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး punk rock ကို Kleziner (ဂျူးဂီတတစ်မျိုး) နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ The Homewreckers သည် riot grrl/pop-punk တီးဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဘရွတ်ကလင်းမှ စတင်ခဲ့သည်။ Your Heart Breaks သည် low-fi တီးဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆက်တယ်မှ တက်လိုက်ကျလိုက်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ ထိုတီးဝိုင်းသစ်များနှင့်အတူ queercore တီထွင်သည့် အသင်း Dresch ကို ၂၀၀၀ခုနှစ်အလယ်တွင် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ underground Chicago DIY punkဖြစ်ရပ်သည် queercore အနုပညာရှင်များကို ဝင့်ဝါခဲ့ပြီး သူတို့၏ အနုပညာကို မျှဝေခဲ့သည်။ FED UPသည် သုံးရက်ကြာဂီတပွဲတော်ဖြစ်ပြီး punk အဖွဲ့အစည်းထဲမှ queer ယဉ်ကျေးမှုကို ကျင်းပခဲ့သည်။
UK တွင်လည်း queercore ဖြစ်ရပ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ Queer Mutiny မှ စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖျော်ဖြေမှုများကို စီစဉ်ခဲ့သော record label မှာ local kid ဖြစ်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ထုတ်ဝေခဲ့သောတီးဝိုင်းများမှာ The Corey Orbisons, Sleeping States, Drunk Granny, Little Paper Squares, Hushbands Fake Tan နှင့် Lianne Hall တို့ဖြစ်သည်။ ထိုတီးဝိုင်းများမှာ DIY ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ပြီး အစိတ်အပိုင်းများကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး queercore နှင့် punk ကို လှုံဆော်ထားသည်။ disco-punk တီးဝိုင်း Vile Vile နှင့် solo lo-fi electro-punk poster Ste Mc Cabe တို့ပါဝင်သည်။ Psycho-Drama club သည် queercore ကိုထောက်ခံခဲ့သည်။ ၄နှစ်ကျော်အထိ alternative queer လူငယ်အတွက် အထင်အရှားကျန်ရှိနေခဲ့သည်။ အင်္ဂလန်အနောက်မြောက်မှ Manifestaနှင့် Lola နှင့် Cartwheels တို့သည် alternative queer ကို ထောက်ကူဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ တီးဝိုင်းအသစ်များနှင့်အတူ queercore မှ ဂီတအမျိုးအစားများကို ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူများမှာ Kenneth Anger, Jack Smith Andy Warhot နှင့် John Waters, Viviennne Dick တို့ဖြစ်ပြီး queerယဉ်ကျေးမှုခွဲများကို ရေးဆွဲတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ၁၉၉၀တွင် J.D.S စာတည်းများက J.D.S ရုပ်ရှင်ညများကို ကွဲပြားသော မြို့များတွင် ပြသခဲ့သည်။ Bruce LaBruce ၏ Boy Girl နှင့် Bruce and Pepper Wayne Gacy’s ၏ Home Movies နှင့် G.B. Jone၏ The Troublemakers တို့ဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်တိုင်းတွင် queecore များကို စူးစမ်းရှာဖွေထားကြသည်။ ၁၉၉၁တွင် No Skin Off My Ass, ၁၉၉၀တွင် G.B. Jone ၏ The Troublemakerနှင့် ၁၉၉၂တွင် The Yo-Yo Gang တို့ပါဝင်သည်။ ၁၉၉၆တွင် Anonymous Boy သည် ပထမဆုံးသက်ဝင်လှုပ်ရှားသော queercor ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။
queercore မှတ်တမ်းတင် ရုပ်ရှင်ကားများတွင် ၁၉၉၆တွင် ထုတ်လွင့်ခဲ့သော Lucy Theme She’s real, Worse than Queerနှင့် Scott Treleaven ၏ A Punk – u – mentary တို့ပါဝင်ခဲ့သည်။ Tracy Flannigan ၏ Rise Above; A Tribe & Documentary ကို ၂၀၀၃ခုနှစ်တွင် ထုတ်လွင့်ခဲ့သည်။ Machae Carmona ၏ Pansy Division Life in A Gay Rock Band ကို ၂၀၀၈ခုနှစ် ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး ရုပ်ရှင်များကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်များကို ပုံမှန်ပြသခဲ့သည်။
၂၀၀၈ခုနှစ်တွင် G.B Jones မှ The Lopop Generation ကို ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ပါဝင်ကြသူများမှာ Jena von Brucker, Mark Ewert, Vaginal Davis, Jane Danger, Jen Smith, Joel Gibb, Anonymous, Scott Treleavon နှင့် Gary Fembat တို့ပါဝင်သည်။ ရုပ်ရှင်တိုင်းသည် အဖြစ်အပျက်ကို ရိုက်ခတ်စေ၍ ကျယ်ပြန့်စေခဲ့သည်။
Punkနှင့်အတူ queercore ယဉ်ကျေးမှုသည် mainstream အပြင်ဘက်တွင် တည်ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် zine များသည် အရေးကြီးစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခဲ့သည်။ ရာနှင့်ချီသော zine များကို network ကွန်ယက်အချင်းချင်းတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး queercore ကို ပျံနှံစေခဲ့သည်။ DIY punk သည် queercore ကို ပြည်စုံစေခဲ့သည်။ ၁၉၉၀တွင် internet ရရှိနှုန်းတိုးမြှင့်လာသကဲ့သို့ queercore zine များကို အွန်လိုင်းတွင် တွေ့ရသည်။ queercore zine label Xerox Revolutionaries သည် အွန်လိုင်းတွင် ၂၀၀၀ခုနှစ်မှ ၂၀၀၅ခုနှစ်အထိ ပျံနှံစေခဲ့သည်။ The Queer Zine Archive Project သည် internet queer zine များ၏ အချက်အလက်များဖြစ်ပြီး ဆက်လက်ကြီးထွားခဲ့သည်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုအားလုံးသည် queercore ကို ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်မှုနှင့် ကိုယ်ပိုင်သရုပ်ပေါ်လွှင်စေသည် ယဉ်ကျေးမှုများဖြစ်ပေါ်လာသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Queercore&oldid=422171" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၆:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။